Emperor , ဇော်ဝင်းထွဋ် - ဆေးဆိုးပန်းရိုက်မျက်နှာ listen or download mp3
accademianazionalescherma » Rock » Emperor , ဇော်ဝင်းထွဋ် - ဆေးဆိုးပန်းရိုက်မျက်နှာ
Emperor 1995 Burma
See the lyrics and sing karaoke to ေဆးဆိုးပန္းရိုက္မ်က္နွာ by ေဇာ္ဝင္းထြဋ္ Zaw Win Htut. Lyrics: ေဆးဆိုးပန္းရိုက္မ်က္နွာ. ဇာ္ဝင္းထြဋ္ Zaw Win Htut. ဆးဆိုးပန္းရိုက္မ်က္ႏွာ အင္ပါယာ.
ဇာ္ဝင္းထြဋ္၏ မွတ္တိုင္မ်ား. Zaw Win Htut - Emperor. Zwe Pyae Really Fan. Musician/Band.
Zaw Win Htut's New Solo Album. ၀၁၇ သင်္ကြန်လက်ဆောင်. ချစ်သီချင်းရိုးရိုးလေးတစ်ပုဒ်.
Zaw Win Htut: The Original Sin (ေဇာ္၀င္းထြဋ္ - ၀ဋ္ေႂကြး) Emperor Music Band Legendary Journey Live Show Date: May 1, 2011 Venue: D'Marquee. channelTitle: myothaw publishedAt: 2011/06/13 07:06:30. Zaw Win Htut: ကႏၲာရခရီးသည္+ဂႏၶ၀င္စိမ္း+ေခတ္ေဟာင္းမင္းသားႀကီး+အခ်စ္တဲ့လား.
album Weekly Top. album Pop Hotlist. music noteChords for လီယိုနတ္ ေမာင္ေမာင္လြင္, ေဇာ္၀င္းထြဋ္ ႏွင့္ Emperor ( The Rock And Roll Travellers ). Diagram Slider. Emperor Show in ETO's band with Zaw Win Htut Pyae Lan Sone. ကာင္းကင္ေမေမ ေဇာ္ဝင္းထြဋ္ ၁၉၈၈.
1 သွားကြပါစို့2အပေါ်ထပ်နဲ့အောက်ထပ်ဇာတ်လမ်း3ဆေးဆိုးပန်းရိုက်မျက်နှာ4ပညတ်တော်ဆယ်ပါး5မယ်သီတာစိုးတာဘယ်သူလဲ6အချွဲမလေး7ယုဇနပင်နဲ့ဖဲကြိုးဝါ 8 စိတ်တေလေ9ဂေါ်လီမလေး 10 အိမ်လိုက်ခဲ့ပါရည်းစားချော 11 ကပ္ပလီမလေး 12 မူယာမာယာမိုး 13 ဖက်ရှင်မလေး. Emperor, Zaw Win Htut.
none Emperor , Zaw Win Htut Emperor , Zaw Win Htut - ဆေးဆိုးပန်းရိုက်မျက်နှာ ‎(Cass, Album) Metal Zone none Burma 1995
Other Formats: MP1 RA RA AHX MIDI AA MP4
Related to Emperor , ဇော်ဝင်းထွဋ် - ဆေးဆိုးပန်းရိုက်မျက်နှာ albums:
My Cousin, The Emperor - A Long Way From Home listen album
B.F.M. - Emperor / Frogger listen album